राष्ट्रको पहिचाननै बेचेर कसरी समृद्ध र सम्पन्न हुन्छ देश? - Gokarna News from Nepal
राष्ट्रको पहिचाननै बेचेर कसरी समृद्ध र सम्पन्न हुन्छ देश?
"धर्मान्तरण राष्ट्ररुपान्तरण हो''
शुक्रबार, पुष ०४, २०७६ by गोकर्ण न्युज
काठमाडौं – मिसन एकता नेपालका संयोजक खेमनाथ आचार्यले हिन्दु धर्म राष्ट्रको पहिचान भएको भन्दै सोही पहिचानलाई ध्वस्त पारेर राष्ट्र सम्पन्न हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सनातन हिन्दु राष्ट्रलाई कायम राख्नु पर्ने भन्दै पछिल्लो समय अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रको पहिचानै बेचेको आरोप लगाए । गोकर्ण न्यूजसँग कुरा गर्दै संयोजक आचार्यले राजनीतिक नेतृत्वले रातारात विदेशी शक्तीको भरमा धर्म निरपेक्षको नाममा डलरको खेती गरेको आरोप लगाए । उनले भने ‘नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई नेपालको पहिचान र समृद्धी चाहिएको छैन । छत केवल विदेशी डलर र फन्डको लागी काम गरिहेका छन । समाजमा भएका सकरात्मक कुरालाई ध्वस्त बनाउँदै , विदेशी उत्पादन भित्र्याउने तर स्वदेशी उत्पादन तिर ध्यान नदिने र भएका लाई समेत वन्द गराउँदै देशलाई अधोगतीमा पु¥याइरहेका छन । जनता सचेत हुनुपर्छ ।’
संयोजक आचार्यले सनातन हिन्दु धर्मनै सबै धर्म र राष्ट्रलाई जोड्ने प्राचिन पहिचान भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मासेर अहिलेका राजनीतिक दलका नेता देखी प्रधानमन्त्री सम्म होलीवाइन पिउँदै हिड्ने कामले देश विदेशी शक्तीले चलाइरहेको टिप्पणी गरे । उनले पछिल्ला समयका घटनाक्रमले देश यस्तै अवस्थामा चले नेपालको अस्तित्वनै मेटिन सक्ने खतरा समेत औल्याए । उनले भने ‘जनताका न्यूनतम आवश्यकता प्रति सरकारको ध्यान छैन । ठुला ठुला र नारा र भाषणले जनतालाई भम्रमा राख्ने काम गर्दै आएका छन् ।’ विदेशी उत्पादन भित्र्याउने काम तिव्र रुपमा बढ्दो छ । यसले देशको भविष्यनै चिन्ताजनक छ । राष्ट्र विकास र नेपालको सनातन हिन्दु धर्मको पहिचानलाई जोगाइराख्नु पर्छ भन्दै विभिन्न चरणमा राष्ट्रव्यापी अभियानहरु मेची-महाकाली अभियान, सत्मार्ग अभियान,मुक्तीनाथ यात्रा ,आमरण अनशन लगाएतका अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका मिसन एकता नेपालका संयोजक खेमनाथ आचार्यसँग गरिएको अन्र्तवार्ताको सम्पादित अशं ः
म समाज र राष्ट्र विकास, समृद्धी हुनुपर्छ भन्ने मान्छे समाजका गतिविधिहरु नियाल्दै देशको गुम्न लागेको अस्तित्व जोगाउनु पर्छ भन्ने ध्ययेका साथ सामाजिक कार्यमा विभिन्न जागरण अभियानहरुमा लागेको छु । मेची महाकाली अभियान, सत्मार्ग अभियान , खुल्ला मञ्चमा आमरण अनसन, मुक्तीनाथ यात्रा लगाएतका अभियानको नेतृत्व गर्दै सामाजिक क्षेत्रमै व्यस्तता छ । देशको पहिचाननै बेच्न खोज्ने विरुद्धका अभियानमा व्यस्त छु ।
मिसन एकता नेपाल कस्तो संगठन हो?
मिसन एकता नेपाल त्यस्तो सामाजिक संगठन हो । यसले नेपाल राष्ट्रको प्राचिनकाल देखी आएको राष्ट्रियता र पहिचानलाई जिवन्त राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता राखेको संगठन हो । सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छौं । धर्म निरपेक्षका नाममा जसरी राष्ट्रको पहिचान र चिनारीलाई मेटाउने चेष्टा भएको छ । त्यसको विरुद्धमा समाजलाई जागरुक बनाउँदै नेपालको आफ्नो प्राचिन पहिचान,संस्कृती,भुगोल तथा स्वदेशीपन र उत्पादनमुखी बनाउन कसरी सकिन्छ ।त्यसबारे हामी घनिभुत रुपमा लागेका छौं । मिसन एकता नेपालले कसैको देखासिकी र आयातित विचारबाट देशको समुद्धी हुदैन भन्नेमा प्रष्ट छ । तर नेपालका राजनीति दल र नेतृत्व पश्चिमाको देखासिकी र आयातित विचारबाट ग्रसित छ । जव सम्म विदेशी प्रभुहरुको विचारलाई त्यागेर देशको संस्कृती,धर्मलाई अगाल्दैनन् तब सम्म देश समृद्धीमा जादैन । सिमन नेपालको प्रमुख मुद्धानै देशको अस्तित्व जोगाउनेमा केन्द्रीत छ । देशको पहिचान जोगाउनु पर्छ भन्नेमा लागेको छ । नेपाल सनातन हिन्दु राष्ट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा लागेको छ । हिन्दु धर्मले हरेक धर्मलाई समन्वय गरेर लगेका उदाहरणहरु हाम्रो नेपाली समाजमा प्रस्तत छन् । यस्तो विश्व सामु चिनिएको हाम्रो नेपालको पहिचाननै मेटाउने कामका विरुद्धमा जनतालाई जागरुक गराउँदै लामो भिजन बोकेर मिसन नेपाल अगाडी बढेको छ ।
कसले बेच्यो राष्ट्रको पहिचान ? राष्ट्रलाई कुनै धर्म विशेषले मात्र चिनाउने,राष्ट्रको अस्तित्व जोगिने,पहिचान जोगिने हुन्छ ? धर्म निरपेक्षता ठिक होइन ?
तपाई हामीलाई जगजाएरै भएका कुराहरु हुन । विभिन्न व्यवस्था परिवर्तनका नाममा प्राचिन सनातन हिन्दु राष्ट्रलाई सकाएका छन् । नेपाली प्रचीन पहिचान भनेकै सनातन हिन्दु राष्ट्र हो । त्यसलाई हत्याउने काम भए । अमुख धर्मलाई बढावा दिदै आईएनजीओ,एनजीयोका काम अहिलेका राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन । अहिलेका नेतृत्वकर्ताहरुले गरिहेका छन । वास्तवमा सबै देश र राष्ट्रको पहिचान हुन्छ । नेपालको पनि त्यस्तै पहिचान र अस्तित्व बोेकेको राष्ट्र हो । धर्मनिरेपक्षता रातारात कहाँबाट आयो । नत १२ बुँदे समझदारी पत्रमा थियो, नत ०६२/०६३ को आन्दोलनमा यसको आवाज उठेको थियो, संविधान सभा निर्वाचनका बेला दलहरु घोषण पत्रमा एजेण्डामा समेत धर्म निरपेक्षता थिएन । नत नेपालमा धर्म निरपेक्षताका लागी लडाई भएको हो ? सक्रीय राजतन्त्र अन्त्यको लागी, लोकतन्त्रको लागी पो आन्दोलन भएका थिए । तर एकाएक कहाँ बाट आयो त भन्दा अन्य डलर र फन्टबाट आयो ।त्यसमा लिप्त भए नेपाली राजनीतिज्ञ । साच्चै विश्व इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल प्राचिन राष्ट्र हो । हिजोको विगत हेर्ने हो भने नेपाललाई सनातन संस्कृतीले जोडेको देखिन्छ । हिन्दुले मेरो मात्र राम्रो हुनुपर्छ, अरुको अहित हुनुपर्छ भनेर कहिले भनेको छैन । ‘सर्वे भवन्तु सुखिनको पाठ पढायो’ । जसले पथ्थरमा पनि भगवानको अस्तित्व देख्यो । जसले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह ग¥यो , जसले राष्ट्रलाई जोड्यो । अहिले पनि नेपाललाई त्यही सनातन धारले जोडिरहेको छ । त्यही जोड्ने चिजलाई नष्ट्र गरिदिनुभयो भने राष्ट्र कसरी बच्छ, कसरी राष्ट्र समृद्धी हुन्छ ? देशको पहिचान मेटेर विकास समृद्धी खोजेर हुन्छ ? जसरी काठमाडौं र जनकपुरलाई सनातन संस्कृतीले जोडेको छ । जसले विश्वभर भएका झण्डै दुई अर्ब ओमकार परिवारहरुको जमातलाई सनातन सस्कृतीले जोडेको छ । यसको मुख्य चिन्तन त नेपालनै हो । नेपालले बेच्ने भनेकै ज्ञान हो, नेपालले विश्व बजारमा लाने भनेकै प्रकृतिले दिएका जडिबुटी खनिज उत्पादन गरेर देशलाई उत्पादनमुखी बनाउनेतिर नेताहरुको ध्यान गएन । गयो त डलर र फण्डमा ।
तपाईले भने जस्तै के नेपाली राजनीति अन्तैबाट परिचालित भएकै हो त ?
सत्य के हो भने ‘धर्मान्तरण भनेकै राष्ट्रन्तारण हो’ । जहाँ इतिहास नष्ट भएर जान्छ त्यहाँको मानव सभ्यता पनि नष्ट भएर गएका इतिहास छन । संस्कृती नष्ट भएपछि राष्ट्रको भुगोल समाप्त हुने र राष्ट्रको आकार वदलिन्छ । भोली नेपालको पहिचान समाप्त भयो भने भोली नेपाल के मानेमा रहने,त्यसकारण देशको संस्कृती जसरी मासिदै गएको छ । त्यसले अफठ्यारो स्थिती ल्याउने देखिन्छ । परिचालितको कुरा त सामान्य जनता सबैलाई जानकारनैछ । जसरी पश्चिमा नेपाल भित्रिएका छन् । एनजीओ , आईएनजीओ मार्फतद्धारा,जसरी होली वाइनका काण्ड चलाएका छन् । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई किनबेच गरिरहेका छन । त्यो प्रष्ट देखिएका छन् । जसरी पहिला पनि जुन पात्रले होलिवाइनलाई अमृत भन्दै खुवाउने काम गरिन ति पात्र पहिले पनि विवादितै थिईन । अहिले अनैतिक कार्य गरेको भन्दै फेरी जेल परेकी छन् । तर नेपालको गंगाजल खादा पुरातन भयो, वुर्जवा भयो,गाईको गहुँत खान नमान्ने,पञ्चाअमृत खान नमान्ने हाम्रा नेता ब्रहाणहरु आज ति पात्रका गुरुको वृह्य रक्सीमा मिसाएर ल्याईएका रक्सीलाई छर्कदै स्वर्ग गइन्छ भन्दै खानु,प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार ग्रहण गर्नुको तापतर्र्य डलरको चलखेल र परिचालित नभएर के त ? यो प्रष्ट छ।
मिसन एकता नेपाल कसरी अगाडी बढ्छ ?
हाम्रो विभिन्न योजना कार्यजनाहरु छन । हामी सुक्ष्म ढङ्गले निरन्तर काम गरिहेका छौं । समाजमा जसले भोली समाजलाई सहि दिशा दिन सकोस । होला यसले तत्कालै रिजल्ट नदेनि सक्छ तर एक दिन यसले सार्थकता पाउँनेछ भनेर लागेका छौं । मुख्य कुरा त जबसम्म जनतामा स्वदेशीपन जागृत हुँदैन तवसम्म देशले फड्को मार्दैन । हिजो नेपालको जुन सस्कृती थियो त्यसलाई निरपेक्षताका नामम बेचियो । नेतृत्वसँग जुन अहिले विचारधारा छन् ति सबै आयातित र फोटोकपी विचारधारा छन् । मुलत फोटो कपीले देश समृद्ध हुँदैन । जसरी सरकारले २०२० लाई पर्यटकिय बर्ष मनाउन खोज्दै छ । के दिएर पर्यटक भित्र्याउन खोज्दैछौं । दिने के छ राज्य सँग ? तिनै वियर खुवाउन, ठुला विल्डिङ्मा राख्न भित्र्याउन हो भने त त्यो पैसा पुनः विदेशनै फर्केर जाने हो । नेपालको व्राण्ड के त ? प्रचारको लागी गर्नु र रुपान्तरणको निम्ती गर्नु फरक चिज हो । अहिले जे जती भएका छन् । सबै प्रचारमुखी भएका छन् । उदाहरणकै लागी १२/१३ बर्ष देखी जसरी वागमती सरसफाईका नाममा प्लाष्टिक टिप्ने मात्र काम भएका छन् यसले त ठोस योजनाबाट होइन प्रचारमुखी तवरमा गएको छ । साच्चै राज्यले गर्ने हो भने आज सुन्दरीजलबाट चोभारसम्म हराभरा वागमती भइसक्नु पर्ने समय हो । वास्तवमा परिणम मुखी भएको छैन । जसरी ०४६ पछि यत्रो विकास भए भन्दै हिड्नुभएको छ राजनीतिज्ञहरु यो त क्रमिक विकास हो । स्वत स्पूर्त रुपमा हुने कुरा हुन । ०४६ पछि राज्यको पोलिसी, लिडरको भिजनले गरेका काम खै त ? बरु भएका उद्योग वन्द भएका छन् । बरु उल्टै अरुको देशबाट वस्तु आयात गरेका छौं । निर्यात के गरियो ? कालाबजारी मौलाउँदो छ ? सरकार कहाँ छ ? यस्ता यावत कुराहरु छन्, हामी यस्ता कुरालाई मध्यनजर गरेर काम गर्ने भिजनमा अगाडी बढेका छौं ।
०४६ पछिका राजनीतिक परिवर्तन लोकतन्त्र,गणतन्त्र स्थापना सम्मलाई परिवर्तन नमान्ने ?
व्यवस्था विभिन्न समयमा परिवर्तन हुँदै आए । हुँदै जान्छन । तर परिवर्तन कसका लागी र केका लागी गरीयो भन्ने प्रश्न मुल हो । नेपालका लागी गरियो, नेपाली जनताको हितको लागी गरियो की अथवा कसैको डिजाइन कसैको फाइदाको लागी गरियो ? म के देख्छु भने नेपाल चाहिएको अत्यान्त निम्न र मध्यमवर्गको लागी देश चाहिएको छ । कर्मचारीतन्त्र र देशका माथिल्लो तहका राजनीतिक लिडरहरुलाई नेपाल चाहिएको जस्तो लाग्दैन । जसलाई चाहिएको छैन त्यसलाई देशको प्यार,प्रेम कसरी हुन्छ ? आज नेपाल सरकारका सचिव, उपसचिव देखी उपल्लोतहका कर्मचारीको कुनको छोरा– छोरी युरोप नपुगेको,बैंक खाता नभएको, घर नभएको कुन छ ? कुन राजनीतिक दलका नेताका छैनन् ? जो देशका निम्ती नभई डलरका लागी लागेका छन् तिनीहरुनै देशलाई चलाउँदैछन । त्यो खालको परिवेश छ, कसरी देश परिवर्तन हुन्छन विकास हुन्छ ? हो ०६२/०६३ आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनमा वाक स्वतन्त्रता पाए गणतन्त्र आयो तर जनताले खोजेका समृद्धी,शान्ती सुरक्षा,विकास चाही कहाँ गयो ? जनताले खोजेका मुलभुत कुराहरु कहाँ समेटिए । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन भने त्यस्तो व्यवस्था र स्वतन्त्रता केका लागी ? राज्यको नितिमै स्पष्ट छैन । हामी हिजो २५ बर्षलाई फर्केर हेरौं त हामी पर निर्भर भएका छौ । समाजमा भएका संरचनालाई भत्काउँदै, कस्तो समृद्धी खोज्दैछौं । हामी त वस्तु उत्पादन गर्दैनौ, आयात गर्नमा गर्व गरिरहेका छौं । स्वदेशी उत्पादन सुन्य छ ? राष्ट्रको नीतिमा के उत्पादन गर्ने के आयात गर्ने के निर्यात गर्ने त्यो राष्ट्रको निति त हुनुप¥यो नी । जे चिज थियो, विचार केन्द्रीत राष्ट्र थियो, देवभुमी थियो त्यो चिजलाई नष्ट गरे । जहाँ बाट ज्ञानप्राप्त गरिन्थ्यो, आयुर्वेद,योगा प्रचार गर्न सकिन्थ्यो, कृषीप्रधानदेश भनिन्छ त्यसलाई नष्ट गर्दै प्लटिङको कन्सेप्ट ल्याइयो । यसमा राज्यको हात हुदैनथियो भने कसरी आउथ्यो ? भुमाफीहरुसँग साठगाठ गरेर देश चलाउन लागे , जनतालाई वेरोजगार बनाइदिने काम भए ? जनता अल्छी बनाइयो, विस्तारै गुलामी तर्फ लगिदैछ । भर्खरै सिमा विवादका कुराहुँदा आज एउटा बोली छ,कुटनितिक प्रयास सुन्य छ ? यो खालका लाचाहार पना के ? कि जनातलाई भन्नु प¥यो हामी बिकेका मान्छे भन्नु प¥यो । सबै भन्दा त नेपालमा राष्ट्रियतामानै बडो कन्फ्युज छ । कसले उठाउँदा राष्ट्रियवाद हुने हो के बिषयमा उठाउँदा अराष्टवाद हुने ? राष्ट्रवाद त त्यो १० औ हजारबर्ष पुरानो सनातन धारनै राष्ट्रियता हो । नेपालको प्राचिन संस्कृतीको धार र पहिचाननै राष्ट्रियता हो ।
मिसन एकता नेपालका उपलब्धी के ? भोली मिसन एकता पार्टीका रुपमा रुपान्तरण हुनसक्छ ?
त्यो त हामीले भन्दा पनि आवश्यताले,जनताले माग गरे रुपान्तरण अवश्य पनि हुन्छ । त्यसलाई नर्कान सकिन्न । देशको प्राचिन समान सस्कृती भएको पहिचानलाई अगाडी ल्याउनु पर्छ भनेर लागेका छौं । हामी लामो लक्ष बोकेर हिडेका छौं । हामीले जसरी काम गरिरहेका छौं । कुनै मुभमेन्ट भन्दा पनि लङ्ग लास्ट भिजनको रुपमा काम गरिरहेका छौं । हाम्रो स्लोगानमै भनेका छौं । ‘व्यक्तिमा व्यक्तित्व निमार्ण गर्दै राष्ट्रको पुनः निमार्ण गर्ने ।’ त्यो भनेको लामो काम हो । त्यसले झट्टै रिजल्ट दिन्छ भन्ने होइन । हाम्रो २०८० सम्मको टारगेट हो । जसरी मकैको एउटा दाना रोपेर मकै उम्रेर फल्ने समय लाग्न समय लाग्छ, हाम्रा काम र साथिहरु त्यसरी लाग्नु भएको छ । उपलब्धी विस्तारै आउँछन । साथीहरुलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छौं । भोली देशको, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थय लगाएतका बिषयको मोडल कस्तो बन्ने लगाएतका कुरामा केन्द्रीत भएर लागिपरेका छौं । त्यसले परिणाम दिन्छ ।
तपाईले आलोचना गरिहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुपनि हिजो यस्तै भन्दै सत्तामा पुगे, भोली तपाई सत्तामा जानुहोला,सत्ताको मात तपाईलाई पनि लाग्ला,उनिहरु जस्तो बन्नुहुन्न भन्नेमा जनता कसरी विश्वस्त हुने ?
मुलत सत्तामा पुगेर होस वा वाहिर बसेरै होस ,नेतृत्वले के कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ भन्ने हुन्छ । जस्तो नेपालको माटो, नेपालको संस्कृती , नेपालको भुगोल , नेपालका महापुरुषलाई राखेर काम गरिन्छ, कि विदेशी विचार, विदेशी लिडर लाई राखेर लिनुहुन्छ भन्ने हो । जसरी अहिले हामीले मेकालेले बनाएको,पश्चिामाले बनाएको शिक्षा प्रणाली पढ्दैछौं । त्यसले नेपालको संस्कृती माटो, भुमी ,प्रकृती पढाएको छैन, नेपालमा रहेका दिव्य जरिबुटीका बारेमा पढाएको छैन । तपाई कसरी समृद्ध बन्नु हुन्छ । आफ््नो पूर्खाप्रति गर्व गर्ने इतिहास पढ्दैनौ,हाम्रो कोशीको बारे पढ्नु भन्दा पहिले नाइल नदीको पढ्छौं भने कसरी समृद्ध आउँछ , यहाँ के छ भन्ने बिषय पढ्नु प¥योनी । सर्वप्रथम त हामी सँग के छ ? त्यो क्लिएर हुनुप¥यो । नभएको भित्र्याउने भएको उत्पादन गर्ने हो । कृषीमा सम्भाव्ययता छ, जडिबुटीलाई उत्पादन गर्न सकिन्छ, अलैची उत्पादन गर्न सकिन्छ , नेपाली गलैचा पहिला तेत्रो माग थियो । अहिले त्यसलाई ध्वस्त पार्ने काम भयो । यस्ता कुरा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा राज्यको नियन्त्रणमा राख्नु प¥यो। विचार स्वदेशी हुनुपर्छ, आयातित होईन । इतिहासका पुर्खाहरुका चिन्नत र गर्व गर्ने खालका कुराहरुलाई आत्मसात गर्नु प¥यो । हाम्रो देशको पहिचान र समृद्धी केमा छ त्यसलाई गभ्भिरता पूर्वक लिनुप¥यो। आफ्नो के छ त्यो खाजौं न । त्यसले देशलाई सम्पन्नता लैजान्छ । अहिलेको लिडरले जनतालाई भम्रमा राख्दै पानि जहाज र रेलका कुरा गर्ने तर ११/१२ बर्षसम्म एउटा पुल बनाउन नसक्ने यस्ता कन्तविजोकहरु त कति छन् छन् । यसले देश समृद्धि तर्फ पक्कै लादैन । जनताले विकल्प अब खोज्छन नै । खोज्नुपर्छ । नेपाल यहि तरल अवस्थामा रहि रह्यो भने १० देखी २० बर्ष भित्रमा कुनै मुभमेन्ट भएन,वैकल्पिक शक्ती उदाएन भने यहि अवस्थामा राष्ट्र रहने छैन । भुमि रहला तर निति नियम, योजना र देश अन्यलेनै चलाउने परिस्थीती सृजित हुन्छ । स्वतन्त्र रहन सक्छ जस्तो लाग्दैन ।